Raadinta Qoraallada Blog-ka ee Technorati | Martech Zone
Raadinta Qoraallada Blog-ka ee Technorati
Khamiista, Diseembar 28, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Technorati waa aalad cajiib ah - laakiin ma hubo sida ugu wanaagsan ee dhammaan astaamaheeda si dhab ah loo suuq geeyo. Mid ka mid ah astaamaha aan jeclahay waa awooda lagu raadiyo dhammaan baloogyada calaamadaha qaarkood. Xitaa waxaan iska diiwaangeliyaa raadinta qaar.
Tag http://www.technorati.com/tag oo waxaad ka heli kartaa astaamaha ugu sareeya saacadan AMA waxaad gali kartaa ereyo raadinta ah. Ka dhashay URL waxay u ekaan doonaan sidan: http://www.technorati.com/posts/tag/adobe+apollo (haddii aad raadineyso adobe apollo).
Haddii aad ogaato, waad iska diiwaangelin kartaa taas RSS quudin hadda! Isticmaalka akhristaha quudinta sida Google Reader, waxaad kaheli kartaa waxyaabaha kuugu soo kordha barta "Adobe Apollo" ama mowduuc kasta oo aad rabto markii la dhajiyo! Waa nooc ka mid ah sida u sameynta digniinta barta internetka oo dhan.
Isticmaal kale oo tan ah ayaa ah in la raadiyo mowduuc ka hor in lagu qoro wax ku saabsan. Tani waxay ku siin kartaa waxyaabahaaga tixraacyo xoog leh iyo trackbacks!
Mawduucyada ugu sarreeya Adsense: Ajax, Flash, WordPress iyo Firefox
28, 2006 at 3: 10 PM
Waad ku mahadsantahay ereyada wanaagsan. Waan ku faraxsanahay inaad jeceshahay waana ku mahadsan yahay inaad dadka kale ogeysiiso.
29, 2006 at 11: 01 AM
Heh, WELI ma heli karo Technorati si aan u cusbooneysiiyo boggeyga! Waxaan u rumayay iyaga MAALMAHA ~! Wixii ku saabsan taageerada tiknoolajiyada, waxba ma dhicin sida guusha:
"Haddii aadan qofna wax ka maqlin toddobaad gudihiis, fadlan aqbal raali-galinta aan ka bixinay dib u dhaca maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaan la kulanno dib-u-dhac xagga Taageerada ah."
29, 2006 at 11: 12 AM
Markay taasi igu dhacday, waxaan lumiyey taariikh laba bilood oo qiimo leh Technorati. Muddo ayey qaadatay, laakiin ugu dambayntii waa la hagaajiyay. Ma qiyaasi karo dhammaan baloogyada ay tahay inay tani ku dhacdo iyo muddada ay ku qaadanayso inay hagaajiyaan. Xitaa waxaan isku dayay inaan ka masaxo boggeyga oo aan ka bilaabo over ma shaqeyn. Waxay wali umuuqdeen inay adeegsadeen xoogaa farsamo daboolid ah.
Dulqaad yeelo. Waxaan ku kalsoonahay inay hagaajin doonaan!
29, 2006 at 11: 17 AM
Haa sidoo kale. Waxay u badan tahay inay sii kordheyso xanuunka. Eebbe wuu ogyahay inaan ka cabanayo Culeys Xog ah!
[Maskaxda… xanuun… waxay ubaahantahay… shukulaato!]
29, 2006 at 12: 54 PM
Vince, waan ka xumahay inaad nagu soo gaarto barta Doug, laakiin waxaan ku helay dhibaatada cilad bixinta bartaada ee nidaamkayaga, waan hagaajiyay, waxaan sameeyay a ping cusub, hadana waxaan ku arkaa qoraaladii ugu dambeeyay ee tixraacayaga.
Mar labaad, waan ka xumahay taas. Dorion
29, 2006 at 1: 31 PM
Cajiib! Ka warran taas!
Mahadsanid, Dorion !!!
29, 2006 at 1: 37 PM
Ka hadal saamaynta iyo otomaatiga! Hadda, waa kuwee daabacaadda Cialdini tan?
29, 2006 at 8: 50 PM
Aynu nidhaahno waxay ahayd dad, la hadlaya dadka, iyo in yar oo emayl ah (otomaatig ah iyada oo loo marayo faallooyinka barta).
Taasi ma tirinaysaa? dc
29, 2006 at 9: 15 PM
Sideedaba, haddii aad ku darto naxariis, wacyigelin, iyo fikir.